November 2020 - Myanmar Mega Property Co.,Ltd
( က ) အာမခံပေးခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်။၁။ တရားစီရင်ရေးသည် လုပ်သားပြည်သူတို့ကို လုံခြုံမှုပေးခြင်းဖြစ်၍ ၊ တည်ဆဲ ဥပဒေအရ အာမခံ မပေးမနေရ ( Bailable ) ပြဋ္ဌာန်းထားသောအမှုများတွင် တရားခံအား အာမခံ ပေး၍ အလွတ် ထုချေခွင့်ပြုရ မည် ဖြစ်ပါသည်။၂။ စွပ်စွဲခံရသူ ( တရားခံ ) အား အမှုတွင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခုခံရင်ဆိုင်နိုင်စေရန် အာမခံပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။၃။ တရားခံနှင့် ၎င်း၏မိသားစုစားဝတ်နေရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်မပျောက်ရလေအောင် ရည်ရွယ်၍ အာမခံ ပေးခြင်းဖြစ်ပေသည်။( ခ ) အာမခံမပေးခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်၁။ တရားခံအား နောက်ထပ်ပြစ်မှုမကျုးလွန်အောင် အချုပ်နှင့်ထားရပေသည်။၂။ တစ်နည်းနည်းဖြင့် မှန်ကန်သော တရားစီရင်ရေးပျက်ပြားအောင် မလုပ်နိုင်စေရန် အချုပ်ဖြင့် ထားရပေ သည်။၃။ မှန်ကန်သော တရားစီရင်ရေးကင်းမဲ့အောင် ၊တရားခံ၏ထွက်ပြေးခြင်း …
အာမခံကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သိမှတ်ဖွယ်ရာမျာ Read More »
𝙏𝙝𝙚 𝙈𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧 𝘽𝙚𝙙𝙧𝙤𝙤𝙢 This ‘sanctuary’ should appear to be relaxing, not too busy and cluttered.1. Remove everything off the dresser top 2. Night-tables are foralamp and maybe one book 3. Make sure lights and lamps all work (they will be ON during the photo-shoot) 4. Obviously, bed properly made. 5. Useaduvet …
𝙃𝙤𝙬 𝙏𝙤 𝙂𝙚𝙩 𝙔𝙤𝙪𝙧 𝙃𝙤𝙢𝙚 𝙍𝙚𝙖𝙙𝙮 𝙁𝙤𝙧 𝙍𝙚𝙖𝙡 𝙀𝙨𝙩𝙖𝙩𝙚 𝙋𝙝𝙤𝙩𝙤𝙨𝙋𝙖𝙧𝙩 –2Read More »
𝙏𝙝𝙚 𝙠𝙞𝙩𝙘𝙝𝙚𝙣 The most important room in the house has always been the kitchen. Here are some of the things OWNERS should do in order to get the best possible photographs of this central room: 1. Clear off the kitchen counter 2. Take all notes, magnets and pictures off the fridge 3. Hide the dish-cloth …
𝙃𝙤𝙬 𝙏𝙤 𝙂𝙚𝙩 𝙔𝙤𝙪𝙧 𝙃𝙤𝙢𝙚 𝙍𝙚𝙖𝙙𝙮 𝙁𝙤𝙧 𝙍𝙚𝙖𝙡 𝙀𝙨𝙩𝙖𝙩𝙚 𝙋𝙝𝙤𝙩𝙤𝙨𝙋𝙖𝙧𝙩 – 1 Read More »